Kedu yoga na-ere ọtụtụ calorie? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Calorie na-ere ọkụ yoga - ngwọta dị irè
Calorie na-ere ọkụ yoga - ngwọta dị irè
Kedu yoga na-ere ọtụtụ calorie?
Nke kacha mmayoga poseskagbaa kalori umegụnyere plank, oche, Chaturanga, wiil,elunri ehihie, ekele anyanwụ na dolphins.Yogabụ akụkụ hà nha ike, mgbanwe, nguzozi, na ntachi obi.bọchị 2020
bhujangasanalie na ihu proneunmukha asana na aka gị n'akụkụ gbagọrọ agbagọ ma ikpere ma debe ọbụ aka n'ala nke dị n'akụkụ obi gị jiri nwayọọ nwayọọ bulie isi gị wee bulie obi gị ruo mgbe ogwe aka gị kwụ ọtọ dị ka o kwere mee, na-enwe mmetụta mgbanwe na lumbar Mgbe emechara izu ike Nọdụ maka sekọnd ole na ole ma weta obi gị ma gbadaa ala ma metụ ala gị na agba gị Hapụ aka gị wee zuru ike inunmukha asana Tinyegharịa mmega ahụ ọ dịkarịa ala ugboro 2 gburugburu akwara nke ala azụ na mpaghara azụ iji weta uru kachasị. Omume a ga - enyere aka mee ka akwara nke mpaghara dum dị ike ma kesaa abụba ọ bụla site na úkwù na mpaghara azụ - Ushtra Asana, kamel na-eme site na ikiri ụkwụ, ka gị na Vajrasana nọ ọdụ na mmiri na-abata, bulie ahụ gị n'ikiri ụkwụ wee nweta na ikpere gị, na-eme ka anya gị meghee ma jiri nwayọ gbadaa, weghachite aka gị ma jide ikiri ụkwụ gị na aka gị na-agbanye ala azụ gị iji nweta ọkwá dị mma ozugbo ị ruru ọnọdụ a iji nweta ọkara iri na abụọ bastrikas ma ọ bụ bellows- dị ka ibu na mmata nke mmegharị nke diaphragm gị Inhale site na imi gị ma tie aka n'ọnụ gị.This omume a maara dị ka Thenasarga Mukha Bhastrika .Nọdụ ala nwayọ ka ị na-ekupụ, wee laghachi navajra asana megharia omume ahụ ugboro abụọ ọ bụ dị mkpa ka anya gị meghee iji zere ịda mbà ma ọ bụ ịdaba karịsịa na mbido, dịka ụbụrụ ga-eji ụdị ọbara ọhụụ ọhụrụ nke na-eme na pos ture - kamel na-agbatị ogidi ikpeazụ ma mepụta ọkpụkpụ dị mma na akwara azụ azụ na-enyere diaphragm aka na Mee ka plexus dị ike site n'ịrụ ike anụ ahụ, ume ịhịa aka na iguzogide ọrịa ma na-akpalikwa akụkụ ahụ site na mmegharị dị ukwuu nke diaphragm jiri nwayọ laghachite n'ime vajra asana ma zuru ike maka nkeji ole na ole na iku ume miri emi Dhanur asana site na unmukha asana- Kpoo ikpere abụọ ma jiri aka kwesịrị ekwesị jide ụkwụ gị, bulie isi gị na obi gị yana apata ụkwụ gị site na ịdọrọ aka gị na ụkwụ gị ka ọkpụkpụ azụ gị dum dị ka azụ na aka ị nwere ike ịnwe mgbatị ahụ azụ gị Jide obere sekọnd ma zuru ike ihu ọzọ lige postura Hanurasana na-agwa akụkụ ahụ niile nke afọ ma weghachite ọrụ kwesịrị ekwesị nke usoro nsị. Tinyegharịa Dhanur asana ma ọ dịkarịa ala ugboro abụọ ọzọ maka uru kachasị.
Emela nke a ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa imeju ma ọ bụ ọrịa akụrụ, dị ka nrụgide nwere ike ịdị elu maka izu izuDwi pada uttanpada asanavon shavasana bulie ụkwụ abụọ gaa na mbara igwe ma kuo ume, gbalịa ka ị ghara ikpere ikpere gị mgbe ị na-ekupụ ụkwụ azụ na ala. Jiri iku ume iku ume na iku ume maka onu ogugu isii ma obu asatọ. Tinyegharịa ugboro abụọ ọzọ wee zuru ike na Shavasana na iku ume miri emi.
backbeat dabara na mmiri
Ndị nwere nsogbu azụ ekwesịghị ime ogologo ụkwụ gbagoo ma mee ya na gbagọrọ agbagọ Kama nke ahụ, ikpere iji zere azụ azụ Eka Pada Uttanpada Asanavon shavasana bulie ụkwụ aka nri gị gaa na mbara igwe ka ị na-anwa ịgbalị ịghara ikpere ikpere mgbe ị na-ekupụ Lower ụkwụ laghachi n'ala Jiri iku ume iku ume na iku ume na ume ume maka ọnụ site na isii ma ọ bụ asatọ na-ekpeghachi ugboro abụọ a. Tinyegharịa otu mmega ahụ n'aka ekpe S eite bulie ụkwụ aka ekpe gị elu na mbara igwe mgbe ị na-eku ume, na-anwa ịghara gbue ikpere gị, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume belata ụkwụ gị azụ n'ala mgbe ị na-eku ume. Jiri iku ume iku ume na ume iku ume maka ịgụta isii ma ọ bụ asatọ.
Tinyegharịa mee nke a ugboro abụọ ọzọ mgbe ị mechara mgbatị ahụ ọ dịkarịa ala ugboro atọ n'akụkụ ọ bụla. Izu ike inshavasana na ume miri emi. ndị nwere nsogbu azụ ekwesịghị ibuli ụkwụ ha ọtọ ma kwesiri ime ya na ikpere ha ikpere iji zere itinye nrụgide na azụ
Holdingjide ihe na-eme ka calorie dị ọkụ
Ogologo oge ị na-anọ naguzo—Ebe obula site na nkeji 30 rue nkeji ise - kariakalorigịọkụnakwa. Ijimeengagharị a, ị ga - eme ka akwara ndị kachasị nwee arụ n’arụ ahụ — mmegharị ahụ — nke na - akpaghị akaọkụọtụtụkalori, kwuru, sị Kristin Lewis, onye nkuzi na studio Y7 dị na New York City.Jenụwarị 3 Dec 2019
Kedu ihe ụmụ okorobịa, nke a bụ Chris Heria. Nabata na vlog ọzọ. Taa, aga m egosi gị omume ise kacha mma iji gbaa ọtụtụ calorie ọkụ.
Mana tupu anyị abanye n'ime mmemme nke na-ere ọtụtụ calorie, anyị ga-ebu ụzọ ghọta ihe na-emetụta ọtụtụ calorie na-ere ọkụ n'oge mmega ahụ. N'ozuzu, e nwere ihe atọ na-ekpebi calorie ole ị na-ere ọkụ. Nke mbụ, nha na ibu.
Ndị toro ogologo ma ọ bụ nwee akwara ga-eme ka calorie dịkwuo ọkụ. Nke abụọ bụ afọ ị nwetara, metabolism gị na-ebelata ma na-ere obere calorie. Na nke atọ bụ ike.
N'ihe dị elu, otú ahụ ka ị na-achọkwu oxygen na mgbatị ahụ, ka calorie na-erekwu. Nke ahụ pụtara na mmadụ abụọ ga-eje ije maịlị ma gbaa calorie dị iche iche ma ọ bụrụ na ị na-agestụ ihe ndị a niile. Ka o sina dị, ị ga-erekwu calorie ndị na-agba kilomita na ọsọ ọsọ kama ịga ije otu maịl.
Mmega ahụ kachasị mma iji gbaa ọtụtụ calorie ugbu a ga-abụ ihe na mmega ahụ, mmega ahụ gụnyere nnukwu otu akwara na otu otu akwara. N'ihi na a na-ejikarị ahụ ike eme ihe, na-eme ka calorie dịkwuo ọkụ. Ọ bụ ezie na mmega ahụ dị ka burpe bụ nke kachasị dị irè maka calorie na-ere ọkụ, ha na-abụkarị ndị siri ike ijide oge.
Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ilekwasị anya na ogo mgbatị ahụ na nkwughachi. Ọ bụrụ na ị mezue mmega ọ bụla zuru oke, ị ga-arụ ọrụ nke ọma na mmemme ọkụ calorie ndị a na-arụ ọrụ nke ọma karịa ịchọta ụzọ dị mfe iji mebie obere. Calorie na-ere ọkụ ga-eme n'agbanyeghị agbanyeghị, mana ị ga-ere ọtụtụ ihe mgbe ị na-eme ya ọfụma yana mgbe ịnwere ike iwepụ ogologo oge n'agaghị agbapụ.
Yabụ na mgbatị ahụ taa, aga m egosi gị, n’uche m, mmemme ise kachasị mma iji gbaa ọtụtụ calorie ume. Emere m mgbatị a iji nọgide na-enwe ike site na ịhazi ya ka ọ bụrụ otu usoro na-ama gị aka ma na-enye gị ohere ịgafe usoro niile na-enweghị ịkwụsị. Ugbu a, anyị ga-emekọ ihe ọnụ.
Isonye, ​​ị ga-emepe ngwa Heria Pro, mgbatị ahụ YouTube. Ma ọ bụrụ na ibudatabeghị ngwa Heria Pro, nweta ya ugbu a na Storelọ Ahịa ma ọ bụ Playlọ Ahịa Google. Ya mere, mgbe ị dị njikere ibido, ka anyị mee otu maka mmega ise, sekọnd 45 na, 15 sekọnd zuru ike n'etiti.
Ma ọ bụrụ na ịmee ọzụzụ ọzụzụ a dị oke elu, ị ga-agbakwu calorie karịa n'otu oge karịa ka ị na-achịkwa cardio oge niile n'ihi na ọ dị oke irè, burpee. Chetakwa, ihe kachasị mkpa bụ ime ka omume ndị a zuo oke ma lekwasị anya n'ụdị ahụ. Nke a ga - enyere gị aka ịmekwu calorie na mmega ahụ ọ bụla ma ga - adịru ogologo oge n’enweghị oke ngagharị.
Ọ bụrụ na ị ka na-amalite amalite, buru ụzọ mee ka isiokwu ahụ zuo oke dị ka o kwere mee. Ou ga-enwe ike iwulite ume na ike gị. Ka anyị gaa maka sekọnd 45. (soft electronic music) - Heria music - Ọ dị mma, lee, anyị nwere burpees, ngụkọta ahụ na-egbu mmadụ.
Anyị ga-ejide ya ebe naanị 15 ezumike nke abụọ. Omume ọzọ anyị ga-amalite ga-abụ squat lunges. Anyị ga-esi na squat banye na nri ehihie.
Can nwere ike ịkwụsịlata, mana ịdala mbà. egwu egwu eletriki) - egwu Heria - Ọ bụrụ na ị na-agbasi mgba ike ọ bụla, otú ọ na-esikwu ike, ka calorie na-ere ọkụ. Ka anyị gaa, ikwughachi ikpeazụ.
Hoo, na na na. E nwere ya. Anu aru m adila n’oku emeela, o burula m ọsụsọ.
Nke ahụ bụ naanị na mmega nke abụọ. Ugbu a, anyị ga-eweta ya n'ala na ntinye na ụzọ ọpụpụ, mepere, mechiri. You're ga-awụli elu, wụpụ ọzọ, wụpụ, mechie ụkwụ gị ọnụ.
Anyị agaba. Jide isi gị, mezie iku ume gị. Akwụsịla.
Nye ya nnwere onwe imegharị. Jide n'aka na ị nwere ezigbo njide n'aka gị. (obere olu elektrọn) Cheta na ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwere ike ịkwụsịlata, mana akwụsịla.
Mee ka obi gị dị elu. Ka ị na-emekwu nke a, otú ahụ ka ntachi obi gị na ume gị ga-emesị bụrụwanye. Ga-enwe ike ime nke a otutu mfe maka a otutu ogologo.
Odi mma, anyi nwere ya. Ma ugbu a, m na-amalite na-arụ ọrụ a ajirija. Anyị na-aga mmega nke anọ.
Nke ahụ ga-abụ akụkụ n'akụkụ akụkụ squats. Cheta, ike dị mkpa mana ekwela ka ọ laa ụdị gị n'iyi. Will ga-eje ije ogologo karịa ma sie ike ma ọ bụrụ na ị mee ya nke ọma.
Ya mere, lekwasị anya na izu oke dị ka o kwere mee. Anyị ga-agbadata ala niile, gbawaa n'otu akụkụ, gaa n'akụkụ nke ọzọ. (Egwuregwu kọmputa dị nro) - Heria music - Ka anyị gaa, ndị ikpeazụ.
Hoo, ọ dị mma, anyị nwere akụkụ ndị na-awụlikwa elu. Ugbu a maka mmega ikpeazụ, anyị ga - eme ikpere ikpere dị elu, ọ bụghị oke ike dị ka mmega ahụ ọ bụla, mana na mmega ikpeazụ mgbe ọ na - agwụ ike ọ ga - eme ka obi gị dị elu ma ị ga - enwe ike ọkwa dị elu na-ejide ike maka ogologo oge. Mgbe ị nọnye m, mee ka ikpere gị gbagoo dị ka ị nwere ike. (soft electronic music) Cheta iku ume site na imi gị na site n'ọnụ gị.
Ọ bụrụ na ị mụta ịhazi iku ume gị, ị ga-enwe ike iwepụta ogologo oge.- egwu Heria.- Nke ikpeazu, ka ike i nwere ike.
Ise, anọ, atọ, abụọ, otu. Hui, enwere anyị ya. Nkeji ise, mmega ise nke, n’uche m, bụ ihe kachasị mma iji gbaa calorie kachasị.
You ga-ahụkwa na ọsụsọ agbaworị m. Site na mgbatị ahụ a haziri ahazi nke ọma, anyị nwere ike ijigide ike anyị n'esepụghị aka wee soro nke a, m na-ekele gị, ị nwere mmalite mbido. Ga-achọ ịga n’ihu n’usoro a ma rụọ ọrụ ike na ntachi obi gị wee mechaa mejupụta ụzọ anọ ya.
Iji nweta ọtụtụ ihe na usoro a dị mma, cheta ịnwe usoro a na ekwentị gị yana ị nweta ohere m niile na mmemme m na m mepụtara na ebumnuche akọwapụtara, dịka: B. Iji wulite akwara nke ọma obere na enweghị ngwa, gaa heriapro.com wee bụrụ onye otu.
Ma dị njikere ibudata ngwa Heria Pro site na Storelọ Ahịa ma ọ bụ Playlọ Ahịa Google ka ị were mgbatị m gaa ebe ọ bụla ị na-aga. Ọ dịka ịnwe m n’akpa gị dịka onye na-azụ onwe gị. Hapụ ikwu n’okpuru, mee ka m mara ihe ị na-arụ na ya na ihe ị ga - eme maka edemede m ọzọ.
Ndenye aha ma ọ bụrụ na ịnweghị. Ana m eziga ụbọchị Tọzdee ọ bụla na elekere 2:00 nke ehihie.
Oge Ọwụwa Anyanwụ. Ma ọ bụrụ na ị kwuo okwu n'ime oge 30 mbụ ị nwere ohere iji merie uwe Heria n'efu. Maka ọdịnaya ndị ọzọ n'ime izu, soro m na Instagram.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkwa ọ bụla, ana m eme ụfọdụ ụdị inye ego. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ka ohere ahụ bụrụ akụkụ ya, gbaa mbọ hụ na ị soro. Maka onye ọ bụla egwu m na-atọ na chanel ahụ, soro m na soundcloud.com/chrisheriato iji nweta egwu m niile kachasị ọhụrụ.
I nwekwara ike inweta egwu m na Spotify na Apple Music yabụ gbaa mbọ hụ na ị so m ebe ahụ. N’iburu nke a n’uche, lee gị n’ụbọchị Tọzdee ọzọ n’elekere abụọ nke ehihie.
USA Eastern oge.Madị ịhụnanya, udo. (Mellow electronic music) Nke ikpeazụ, ụmụ okorobịa. (otiti otiti)
Nwere ike idalata site na ịme yoga?
Na-eme yoganwekwara ike inye akagịmepee ahụ ike ma melite metabolism gị. Mgbe mweghachiyogaabụghị ụdị anụ ahụ karịsịayoga, ọ ka na-enyere aka naọnwụ ọnwụ.Otuọmụmụ chọpụtara na mweghachiyogadị irè n'inyere ụmụ nwanyị buru oke ibu akahapụ ibu ibu, gụnyere abụba afọ.
A maara Yoga maka uru ntụgharị uche dị jụụ, ma na ma na akwa, ma ajụjụ ka ukwuu nke na-eche n'uche, yoga nwere ike inyere gị aka ịkwụsị ibu? onye nlekọta ahụike n'ịntanetị na-enyere ụmụ nwanyị aka idalata ma bie ndụ na-eju afọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ na ọwa m, biko jide n'aka na ịdenye aha na isiokwu a dịka na ọwa m. Tinye mgbatị ahụ ị na-ahụkarị na mgbatị ahụ ma m ghọtara kpamkpam na ịchọrọ ịkwado maka ndụ gị niile mana atụla ụjọ oge niile maka mgbatị gị ma ọ bụ nwee mmetụta na ị na-anwụ site na ụkwara ume ọkụ, yabụ ezigbo ajụjụ bụ, ọ bụ Yoga Ọ Bụ Nhọrọ Na-arụ Ọrụ Mgbe Ọ Na-abịa Loss? Ekpebiri m ime nyocha.
Achọrọ m ịntanetị ma lee isiokwu na isiokwu YouTube iji chọta azịza ajụjụ a. Site na nyocha m, achọpụtara m na ajụjụ a dị mkpa na obodo yogi, mana achọtara m otu ihe. E nwere yoga ụzọ abụọ iji chee maka naanị ịkpọ aha ole na ole, ha nwere uru ị ga-eji chebe onwe ha.
Ha anaghị enyere gị aka ịkwụsị ibu. Ma e nwere ụdị yoga ọzọ nke nwere yoga yoga nke siri ike nke ukwuu dị ka Vinyasa Flow na Ashtanga nwere mmegharị na ntụgharị mgbe a na-eji yoga eme ihe na nke a na-enyere gị aka idalata ma meziwanye ahụ gị ịgbanwe obi gị ọnụego Ọ dị elu, ọsụsọ gị na akwara ga-eme ka ike gị sie ike, ị ga-ewulite ihe ndị ọzọ na-ere ọkụ na ahụ gị ma ihe ndị a bụ isi ihe na-eme ka ị ghara ibu ibu ugbu a, achọrọ m ịtọpụ ihe m na-ekwu site na yoga. na otu Alldị ya niile na-eweta nghọta doro anya na njikọ miri emi gị na onwe gị na-apụ na akwa, nke pụtara na ị naghị enwe nchekasị ma nwee ike ịme mkpebi ndị ga-adịrị gị mma n'ụbọchị niile, yabụ ị ga-esoro gị belata izugbe nke nrụgide na ahụ gị mgbe ahụ gị na-echegbu onwe gị Nnukwu, homonụ ahụ gị na-agwa ahụ gị ka ọ jigide ụlọ ahịa abụba ya n'ihi na ị nọ n'ụdị ụfọdụ ihe ize ndụ ma nwee ike ịgabiga ọnọdụ a mgbe ị na-enwechaghị nchekasị na enweghi ihe kpatara na ahụ gị ga-adị na abụba ijide. Nke kachasị mma yoga niile nyere gị aka ịhụ onwe gị n'anya ma nwee mmetụta dị mma na akpụkpọ ahụ gị.Ọ dị m ka akpukpọ ahụ m bụ isi ihe gbanwere maka meso, agbanyeghị n'ụdị yoga nwere ike ọ gaghị enyere gị aka ibu ibu weight na-eme mkpebi ka mma maka onwe gị na ị nọ n'echiche ziri ezi nke na-enye gị ohere ịdị na-agbanwe agbanwe na ịbelata.
Yome Yoga Naanị na Notgbanwe Agbanwe Nri Gị agaghị enyere gị aka ịkwụsị ibu. Ou gaghị ebu ibu ma ọ bụrụ na ị gbanweghị nri gị! Yabụ ụdị yoga ị họọrọ ịme, gbaa mbọ jikọta nke a na nri dị ọcha ma ịmara ihe ọ mara mma, ọ na-egosi na ịkwesighi ịme oke arụmọrụ, ọsụsọ dị ka CrossFit. Ikwu n'okpuru, Ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị ịnwụ maka ụdị mgbatị ndị a, ọ ga-amasị m ịme akụkụ ntụgharị uche nke yoga mana n'otu oge ahụ gbakwunye na mgbatị ahụ na-agba ume nke na-enyere ụda m aka ma nyere m aka ibute ibu nke ọma n'oge. . Ya mere n'onwe m na-agbaso usoro yoga a na-akpọ '3 Week Yoga Retreat' ebe ndị na-amalite yogi dị ka m nwere ike ịmụtakwu mmegharị dị iche iche ma merie ha izu atọ na ndị ọkachamara yoga zụrụ azụ. Enwere ike ịchọta '3 Week Yoga Retreat' na Beachbody On D emandwhich bụ ọrụ ntanetị sitere na Beachbody ma na-enye mmega ahụ dịgasị iche iche site na cardio dị elu na yoga na ụdị dị iche iche n'etiti.
Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale '3 Week Yoga Retreat' n'efu maka ụbọchị 14, pịa njikọ ahụ na nkọwa dị n'okpuru ma ọ ga-akpọrọ gị gaa ebe ahụ. Ọ bụrụ na ịchọta nke a na-enye aka, dị ka isiokwu a ma denye aha na ọwa m maka ị na-ahụ ndụmọdụ ahụike na-adọrọ mmasị na ajụjụ m ga-eme n'ọdịnihu.
Kedụ ka m ga-esi gbaa calorie 500 n'otu elekere?
Ọkụ Calories 500Rụ Ọrụ Na Homelọ (30-Min Workouts)
Ọzụzụ dị elu dị elu (HIIT)
Mgbatị ahụ siri ike.
Hey onye ọ bụla nọ ebe ahụ. Ọ bụzi Onye Nchịkwa Dan Long na Ihe karịrị 40 Protocol. Na taa ị ga-amụta otu esi ere ọkụ calorie 500 naanị n'ime nkeji iri atọ.
Ugbu a, anyị niile maara na naanị ihe ọ na-ewe bụ ịgbasi abụba ike. Ọ na-achọkwa amamihe. Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịpụ abụba.
Nweghị ike ịgbanahụ nri na-adịghị mma, mana ị nwere ike ịpụ abụba ọjọọ. Taa m ga - agwa gị, m ga - egosi gị - n'ihi na m nọ ebe mgbatị ahụ. Abịara m ebe a ọkachasị maka gị ka m nwee ike igosi gị otu esi ere ọkụ calorie 500 naanị n’ime nkeji iri atọ.
Ugbu a na-ege ntị, tupu m amalite, echefula m kwuru ihe karịrị 40 Nkeji n'ihi na m bụ 45 afọ - 45 afọ na m na nrọ m. Taa achoro m ka inwee nke gi. Ya mere, m ga-egosi gị nke a.
Ya mere, nọrọ m ebe a Ọ bụ naanị obere edemede. Ma mee m amara - ọ bụrụ na ihe ịchọrọ, ihe ị hụrụ masịrị gị, wetuo okwu n'okpuru. Nwere ike inye m ihe ịtụnanya dịka: B.
Daalụ Dan nwere akara ngosi abụọ. Mana ka m gakwuru nke ahụ. N'ihi na nke a bụ nọmba otu igodo.
Ugbu a azụrụ m ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu n'oge m - nne, nna, ụmụaka, ihe ọ bụla, ndị Olympia. Oge ọ bụla mmadụ bịara n’onu ọnụ ụzọ mgbatị a wee sị, Dan, ị nwere ike inyere m aka tufuo pound ise n’izu a? Achọrọ m ya ugbu a, m nwere ọgụ n'ihu m. Ma ọ bụ m ga-aga ndị agha.
Achọrọ m ida pound ise ahụ. Ya buru ibu burdan. Ma ọ bụ enwere m oge ịse foto ma achọrọ m wedata abụba afọ iji pụọ.
Ọfọn, nke ahụ bụ ihe kachasị mkpa m mere ndị ahịa m ọ bụla kwụrụ m nnukwu ego, ọtụtụ ego iji mụta ihe nzuzo m. Ugbu a, m ga-aga ebe a n'ihi na m ga-amalite na ya Ee, ị maara ihe nke ahụ bụ, ọ bụghị gị? Nke a bụ stairmaster. Ugbu a, ị gaghịzi anọ na mgbatị ahụ iji chọta steepụ.
Nwere ike ịchọta steepụ na ala nke ebe mgbakọ ahụ, n'otu n'ime ụlọ ndị ahụ na ogbe ndịda, ma ọ bụ ị nwere ike ịnwe steepụ n'otu ebe na ụlọ gị - naanị chọọ steepụ. Ugbu a, nke a bụ mgbatị ahụ. Anyị niile gbasara ịhapụ abụba.
Ugbu a pound ise - ka anyị gaa. Aga m agba oso ebe a oso. Nke a bụ igwe igwe eji eme abụba kacha baa uru.
Ọ dị mma? M ga-amalite igwe a. Aga m agwa gị otu ị ga - esi gbaa abụba abụba ise - dị mfe - dịka calorie 500 naanị n’ime nkeji iri atọ. Ugbu a, ana m ewu ihe ahụ.
Aga m agbakwa ya ọsọ ebe a, Ọ D? MMA? Mgbe ị rịgoro steepụ gị - ugbu a ị hụrụ nke ahụ? Na-ahụ ogwe aka ahụ? Ọ bụrụ na ị nwere akpịrị dị ala, nke a bụ ihe dị mma n’ihi na ọ na - enyere aka iwepụ ụfọdụ nsogbu n’azụ gị. Ugbu a ike gị nọ na nke a eases Machine na / ma ọ bụ na akwa mgbago mkpa gị itoolu na 10, nke pụtara 10 kasị ufiop. Itoolu kachasị njọ, ọ bụghị ya? Will ga-etinye akụrụngwa gị na nkeji iri atọ.
You ga-arụ ọrụ kachasị ike maka nkeji iri atọ. Ọ bụrụ na ịmee, a na m ekwe gị nkwa na obi gị ga-aba ụba. Ọ bụrụ na ị ga - eme oge, nke ga - abụ nnukwu ike maka, sịnụ, nkeji abụọ, belata ntakịrị ike maka nkeji abụọ wee weghachite, ị ga - ere ọtụtụ calorie.
Ya mere, Stairmaster bụ isi ihe na-eme ka calorie 500 dị ọkụ naanị na 30 nkeji. Ugbu a, egbula m oge ịgwa gị ihe nzuzo a. Maka na ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmị calorie 500, ihe ị ga - eme bụ ịwụli elu n’otu steepụ.
Ma n'ezie ị ga-eru ike karịa ka m na-eme ugbu a. N'ihi na nke ahụ agaghị - m ga - enwe ike ịgwa gị okwu. Ma ị ga-amata jam na ihe a, Ọ dị mma? Ghaghị ime ka ọ mee ma mee ka ọ mee.
Na tiori, ọ bụrụ na ị na-emega ahụ naanị nkeji 30 ma gbaa calorie 500, paụnd abụba bụ calorie 3,500. Mana nke ahụ anaghị agụnye 24-hour, 48-hour post-combustion. Ọnụ ọgụgụ metabolic na-adị elu, nri? Burn na-ere abụba n’ọkụ mgbe ị na-ehi ụra n’ụlọ.
Ee, aka nri - yabụ ihe ọ bụla ị mere, ekwentị, ị ka na-ere abụba afọ - calorie 500 site na igwe ọrụ a dị egwu. Ugbu a, m ga-akwụsị, n'ihi na m nọ ebe a. Achọrọ m ịgwa gị ọzọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ahụ gị na-arọ nrọ, naanị ị mejuputa igwe a. Ma e wezụga, ịkwesịrị ịkwaga n'ụzọ dị iche, n'ihi na mgbe ị toro karịa 40 dị ka m - 45 afọ - ọ bụrụ na ịchọrọ biceps, ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ obi gị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọrọ, ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ahụ ike, gị niile nwere ime bụ ịkwaga dị iche iche 40 nkeji, na taa igwe a agaghị enyere gị aka ma enwere m ihe maka gị. Ọ dị mma ịnọ na njikọ a.
See njikọ a na nke abụọ ọ bụla ị hụrụ ya n’isiokwu a. Ma burugodị ụzọ mee m amara. Ọ bụrụ na ị hụrụ ọdịnaya a n'anya ma chọọ karịa n'aka m ugbu a, dee na nkọwa ndị dị n'okpuru, tinye ee Dan, akara ngosi abụọ - ee, Dan, akara ngosi abụọ.
Mee okwu a ka ọ bụrụ òkè m, Ọ dị mma? Kesara ya onye onye Ha huru n'anya ka inwere ike inyefe ha ozi a. N'ihi na ebe a na Usoro karịrị 40 anyị na-eji ihe karịrị mmadụ 330,000 na-eji usoro a, nke m ga-ewebata gị n'okpuru njikọ a. Ọ bụ ugbu a ka ị pịa njikọ.
Yoga ọ ka mma karịa mgbatị ahụ?
Yogaonye na-enye ọzụzụ, Yogesh Chavhan na-ekwu, “Amgbatị ahụnnọkọ nwere ike ime ka ike gwụ gị na agụụ mgbeyogana-eme ka ị ghara ime nri, na-agbakwa ume. Nawaz na-ekwu na mgbeyoganwere mgbakwunye ya dị iche iche, na-egbochi ndịiche dị iche (dịka ikeyoga),yogaadịghị enye uru obi, nke dị oke mkpaỌnwa Ise 2, 2017
Ime mgbatị ahụ oge 1 ọ zuru?
Dị ka a ọmụmụ bipụtara na American Journal of Physiology, 30 nkeji nkemmega ahụ kwa ụbọchịdị nnọọ irè maka ịhapụ ibu dị ka nkeji 60.08/24/2012
Ego ole ka m ga-atụfu ma ọ bụrụ na m na-emega ahụ́ otu awa n’ụbọchị?
Na-eje ije1 awaonye obulaụbọchị nwere ikeenyere gị aka ịmịpụ calorie na, n'aka nke ya,hapụ ibu ibu. Naotuọmụmụ, 11 agafeghị oke-ibu ibulostmụ nwanyị furu efu na kilogram 17 (7.7 n'arọ), ma ọ bụ 10% nke ahụ mbụ haibu ibu, mgbe ọnwa isii brisk gasịrịkwa ụbọchịna-aga ije (3).25.05.2020
Kedu ụzọ kachasị ọsọ iji gbaa calorie ume?
Ninggba ọsọ bụ ihe mmeri maka ọtụtụkalori gbarakwa awa. Bgba ịnyịnya ígwè, ịgba ọsọ, na igwu mmiri bụ nhọrọ ndị magburu onwe ha. Omume HIIT dịkwa oke mmamaka calorie na-ere ọkụ. Mgbe emechara mgbatị ahụ HIIT, ahụ gị ga-aga n'ihugbaa kalori umeruo awa 24.Ọnwa Ise 15, 2019
Ego ole ka calorie ị na-ere ọkụ n’ime nkeji iri atọ?
Malite site na ịga ije ma rụọ ọrụ gị ruo otu ịgba ọsọ ọsọ; ma ọ bụ gbalịa ịgbagharị ọzọ na ịgba ọsọ maka mgbatị siri ike. Ọ bụrụgịna-agba ọsọ na ijeụkwụ 10Nkejikwa mile,gịnwere ikeọkụOchie 396kalorin'imeNkeji 30.
Gini mere yoga ji eme otutu oku?
Gbaa mbọ hụ na ihe ngosi 7 ndị a bụ akụkụ nke omume gị oge niile. Ọnọdụ a na-ere calorie mega n'ihi na ọ na-achọ isi otu akwara dị iche iche itinye aka, gụnyere nsị gị, ubu, na ọnya gị, ebe ị na-amanye ahụ gị iji gbochie ike ndọda.
Kedu nke yoga kachasị mma maka abụba na-ere ọkụ?
Nkịta na-eche ihu na-echekarị na ogwe aka gị, ubu gị, ụkwụ gị, na azụ gị. Onwe m, ọ dị m ka nnukwu ọkụ na-agba m, n'ihi ya, echere m na ọ dị mma maka ịkwanye ihe nkwata! Nke a bụ otu esi eme ya. Malite na nkasi obi na-eche ihu. Jiri nwayọ bulie ụkwụ aka nri gị n’ala n’azụ gị.
You na-agbanyekwu calorie na-eme Vinyasa ma ọ bụ Bikram Yoga?
Ezie na ị ga-n'ozuzu ọkụ ọzọ calories na a Bikram ma ọ bụ Vinyasa karịa ị ga-na a ume ọhụrụ, yoga kpọmkwem kwuru na ị (ma ọ bụ gị onye nkụzi) họrọ okwu a otutu, oke. Na-achọ iwere egwuregwu yoga gị na ọkwa ọzọ?